भारतबाट घर फर्कनै सास्ती- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
भारतबाट घर फर्कनै सास्ती
रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य भारतमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि सरकारले हालसम्म ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।
जेष्ठ २६, २०७७ सुरेशराज न्यौपाने
नयाँदिल्ली — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्ने योजनाअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट शुक्रबारदेखि नेपालीहरू फर्कन थालेका छन् । तर, रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य भारतमा रहेका नेपालीका लागि भने सरकारले कुनै ठोस योजना अघि सारेको छैन ।
सरकारले भारतबाट फर्कनेहरूका लागि विभिन्न २० वटा नाका खुला गरिएको मात्र जनाएको छ । सरकारले भारतमा रहेका नेपालीहरूका लागि प्रस्ट योजना नल्याउँदा घर फर्कने दिन कुरिरहेका नेपालीहरूको सास्ती दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । लकडाउनका कारण रोजगारी गुम्दा धेरैलाई बस्नखान नै मुस्किल भएको छ । त्यसमाथि केही दिनयता भारतमा संक्रमण तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेकाले उनीहरूमा त्राससमेत बढाएको छ ।
बर्सेनि १५ देखि २० लाखको संख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत आउने गरेका छन् । अध्ययन, उपचार, तीर्थयात्रा र अन्य प्रयोजनका लागि आउनेको संख्या पनि हजारौं छ । तीमध्ये कतिपय लकडाउनकै अवधिमा जसोतसो घर फर्किए पनि हाल ठूलो संख्या प्रवासी नेपालीहरू घर फर्कने दिन कुरेर बसेका छन् । सार्वजनिक सवारी साधन पर्याप्त मात्रामा नचल्दा दक्षिण भारतका केरला, चेन्नई, बेंग्लोरसँगै महाराष्ट्र र राजस्थानमा रहेका नेपालीहरू घर जान पाएका छैनन् । त्यसमाथि बस सञ्चालकले मौका छोपेर चर्को भाडा असुलिरहेका छन् ।
गुल्मी घर भएका नीलबहादुर विक एक वर्षदेखि दक्षिण भारतको केरलाको एउटा सपिङ मलको सैलुनमा काम गर्दै आएका थिए । तीन महिनादेखि बन्द सैलुनका साहूले असोजदेखि मात्र सैलुन खुल्ने जनाउँदै घर जाऊ भनिसकेका छन् । तर केरलामा लकडाउन खुकुलो भएखपनि त्यहाँबाट अन्य राज्यमा जाने सार्वजनिक यातायात नचलेकाले उनी अड्किएका छन् । लामो समयदेखि काम नहुँदा भएको पैसा पनि खानबस्नमै सकिएको छ । ‘काम पनि छैन, खर्च पनि छैन कसरी बाँच्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ,’ विकले कान्तिपुरसँग भने ।
दिल्लीमै रहेका रौतहतका जकाउल्ला अन्सारीको सिलाइकटाइको काम पनि लकडाउनयता ठप्प छ । अरू बेला ट्रेनमा जाँदा बढीमा १८ सय भारु लाग्ने गरेकोमा केही सीमित मात्रामा चलेका बसहरूले बिहारको बैरगनियासम्मका लागि ३५ सय भारु तोकेका छन् । त्यसमाथि श्रीमती, छोराछोरी र भाइसमेत गरी ७ जनाका लागि भाडा जुटाउन उनले सम्भव देखेका छैनन् । लकडाउनमा कमाइ नहुँदा त्यसै पनि उनको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढिसकेको छ । ‘चिनेजानेकाबाट रासनपानी सरसापट गरेर चलाएको छु, धन्न घरबेटी असल परेका छन्, भाडा काम सुरु भएपछि दिए हुन्छ भने,’ उनले भने । रेलयात्राका लागि भने आधार कार्ड चाहिने भएकाले उनी समस्यामा छन् । ‘पहिले कुनै दिक्कत थिएन, अहिले त टिकट नै पाइएन, बस्ने कसरी बस्ने, जाने कसरी जाने भएको छ,’ अन्सारीले गला अवरुद्ध पार्दै भने ।
तीन महिनाअघिसम्म पनि सुनसरीका राजकुमार मेहतालाई कामको चिन्ता थिएन । राजस्थानको बारमेरमा घर बनाउने काममा व्यस्त थिए उनी । कमाइ पनि राम्रै थियो । गाउँका अन्य तीन जनासँगै बस्थे । उता गाउँमा रहेका परिवारलाई पनि खासै चिन्ता थिएन । त्यसमाथि दिनहुँ फोनमा कुरा भई नै रहन्थ्यो । तर, लकडाउनका कारण परिस्थिति एकाएक फेरिएको छ । काम बन्द भयो । एकातिर संक्रमणको चिन्ता छँदै छ त्यसमाथि छाक टार्नै मुस्किल पर्न थालेको छ । दिन बित्दै जाँदा थप गाह्रो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ उनलाई । जेनतेन धानिरहेका छैनन् । तर, उनको खर्च सकिँदै गएको र कोरोनाको संक्रमण पनि बढ्दै गएका कारण उनमा छटपटी बढ्दै गएको छ । त्यही भएर जसरी भए पनि घर जाने निधो गरेका छन् । तर, पनि कुनै उपाय हात परेको छैन । उनी भारतमा काम गर्न आउन थालेको बीस वर्षभन्दा बढी भयो । सधैं साधारण क्लासमा यात्रा गर्दा उनलाई कुनै कागजात मागिएन । तर, केही दिनअघि टिकट काट्न गएका उनी भारतीय बाहेकका अरूलाई दिन मिल्दैन भनेर त्यत्तिकै फर्किए ।
करिब २८ सय किमिको दूरी पैदल जाने कुरा पनि भएन । गर्मीको मौसम । त्यसमाथि राजस्थान । ‘बसेको ठाउँबाट बाहिर निस्कन त गाह्रो छ अब हिँडेर जाने त कुरै भएन,’ उनले भने । तर, दिन बित्दै जाँदा टिकटका लागि जोगाएको पैसा पनि सकिन्छ भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ । ‘न रेलको टिकट पाइन्छ न अन्य सवारी साधनमा जान सक्ने हैसियत छ यस्तै हो भने त भोलि के हुन्छ भन्ने छैन,’ मेहताले चिन्तित हुँदै भने । उता परिवारले गर्ने चिन्ता बेग्लै छ । ‘श्रीमती र बालबच्चाले अरू आइसके किन नआएको भनेर सोध्छन्, मैले के जवाफ दिनु हुन्छ ?’ उनले भने ।
भारतकाे दिल्लीमा अलपत्र परेका राैतहटका जकाउल्ला अन्सारीकाे परिवार ।
दैलेखका खेमराम भण्डारी उत्तराखण्डको पौरीमा सडक बनाउने काममा संलग्न थिए । उनको चैतको दोस्रो साता नेपाल जाने योजना नै थियो । तर, एकाएक लकडाउन भइदियो । जसले गर्दा अन्य तीन जना गाउँलेसहित भण्डारी त्यत्तिकै रोकिए । लकडाउनका सुरुका दिनमा संक्रमणबाट बच्नुपर्छ भनेर उनीहरू यतै बसे । लकडाउन लम्बिँदै गयो । र, उनीहरूसँग भएको पैसा पनि सकिन थाल्यो । केही दिनपछि खानै मुस्किल हुने कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् उनी । मिस्त्रीहरू आआफ्नो घर गएकाले काम तत्काल सुचारु हुने पनि देखिँदैन । उता परिवारले दिनहुँ अहिलेसम्म किन नहिँडेको ? दुुनियाँ आइसके भनेर प्रश्न तेस्र्याउँदा मन थप घोच्छ । ‘आफ्नो व्यथा आफैंलाई थाहा छ, तर के गर्नु परिवारलाई सबै ठीक छ भन्नै पर्‍यो,’ उनले भने ।
घर जानका लागि प्रयास नगरेका होइनन् । तर, सार्वजनिक यातायात राम्ररी नचल्दा बसहरूले मनपरी भाडा भनेका छन् । अरू बेला खाना खाएर रुपैडिहासम्म जान हजार रुपैयाँ भारु पुग्नेमा अहिले बसवालाले सात हजारसम्म भण्डारीले बताए । जसले गर्दा भण्डारी र साथीहरू भएको बाटा खर्च पनि सकिने चिन्तामा डुबेका छन् ।
दिल्लीस्थित दूतावासले सहयोग गर्ने आसमा धेरै पटक फोन पनि घुमाए । धेरै पटक फोन नै उठेन । उठेको बेला दूतावासका कर्मचारीले कुनै ठोस जवाफ नदिएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘यस्तै भइरह्यो भने त रोगको डरभन्दा पनि भोकको डर लाग्न थालेको छ,’ उनले भने ।
सामाजिक सन्जालमार्फत अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर ल्याएको थाहा पाउँदा उनलाई थप पीडा हुन्छ । ‘भारतमा काम गर्नेहरूलाई त राज्यले नागरिक नै ठानेन, निकै दु:ख लागेको छ,’ उनले आक्रोशित मुद्रामा भने । तर, आफ्ना नगारिकहरूलाई जसोतसो सीमासम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारीबाट सरकार उम्कन नपाउने भण्डारीको भनाइ छ । ‘जसरी भए पनि आफ्नो माटोमा टेक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।
दिल्ली नजिकैको गाजियावादको एक रेस्टुराँमा काम गर्दै आएका बलबहादुर साउदको छटपटी उस्तै छ । साउद अछामबाट फर्केको एक महिना नबित्दै लकडाउन भयो । लकडाउनले काम पनि बन्द भयो । कहिले सामुदायिक भान्सा त कहिले ऋणसापट गरेर श्रीमती, दुइटा छोरा र एउटी छोरीको छाक टारिरहेका छन् । खानाबस्नको समस्या हुन थालेपछि नेपाल जाने सुर पनि कसे । तर, भाडा सुन्दै साउदको होस उड्यो । सामान्य अवस्थामा बसले एक जनाको बढीमा ५ सय लाग्ने गरेकोमा अहिले २ हजार ५ सय पुगेको छ । सिमासम्म पुगेर पनि भएन । त्यहाँबाट फेरि अछाम पुग्न थप खर्च लाग्छ । त्यसैले उनका सामु बस भाडा सामान्य नभए सम्म पर्खिनुको विकल्प छैन । सिमा पुगेपछि पनि त्यहाँको क्वारेन्टाइन सुविधाले छोराछोरीलाई संक्रमण हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै छ साउदलाई । ‘पहिलो त अहिलेको चर्को भाडा तिर्ने बुता नै छैन, त्यसमाथि बोर्डरमा के हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि छ,’ साउदले भने ।
उता पन्जाबमा इन्जिनियरिङ अध्ययनरत धनुषाका श्यामकुमार रजकले पनि रेलको टिकट काट्न पाएनन् । कलेजले अक्टोबर अघि पढाइ नहुने जानकारी दिइसकेको छ । तर, टिकट नहुँदा रजक घर जान पाएका छैनन् । उता घरमा परिवारमा छोरोको चिन्ता त्यत्तिकै छ । अरूले जस्तै उनले पनि घर जानका लागि केही सहयोग पाउने आसमा दूतावासमा सम्पर्क गरेका थिए । तर, दूतावासले आलटाले जवाफ मात्र दियो ।
जबकि प्रवासी संगठनका अधिकारीहरू दूतावासले पहल गरेको खण्डमा नेपालीहरूलाई घर फर्कन सहज हुने बताउँछन् । अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय सचिव ऐनबहादुर रावलले दूतावासले भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने हो भने घर जाने नेपालीहरूले ठूलो राहत पाउने बताउँछन् । ‘दूतावासले अलिकति चासो देखायो भने पनि भाडामा भइरहेको लुट रोकिन्थ्यो, ट्रेनमा पनि टिकट पाउँथे,’ रावलले भने ।
तर, यता नेपाली दूतावासले भने रेल टिकटका लागि सम्पर्कमा आएकाहरूलाई आवश्यक सिफारिस दिएको दाबी गरेको छ । दिल्ली बाहिरका नेपालीलाई पनि यातायातमा ठूलै समस्या परेको खण्डमा अनलाइनबाट पनि सुविधा दिन सक्ने जनाएको छ । ‘दूतावासको सम्पर्कमा आउनेलाई त टिकटका लागि आवश्यक सिफारिस दिइरहेका छौं र बाहिर पनि समस्या परेको खण्डमा अनलाइनबाट सुविधा दिन सकिन्छ,’ दूतावासका पवक्ता हरि ओडारीले भने । तर, समस्या सुनाउनका लागि दूतावासमा सम्पर्क गर्ने प्राय: सबै नेपालीहरूको ‘फोन उठ्दैन’ भन्ने गुनासोबारे भने उनी नाजवाफ रहे । प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७७ ०९:४८
पर्सामा थपिए ८ संक्रमित
जेष्ठ २६, २०७७ भूषण यादव
वीरगन्ज — भारतबाट फर्किएका पर्साका थप ८ जनामा सोमबार बिहान कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको सन्ठीस्थित क्वारेन्टाइनमा रहेका ८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालका कोर्डिनेटर डा. उदयनारायण सिंहले जनाए ।
‘नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा २० वर्ष देखि ५५ वर्ष समूहका आठ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो,’ कान्तिपुरसँग डा. सिंहले भने, ‘त्यसमा एक जना २५ वर्षीया महिला पनि छिन् ।’ गत जेठ २३ मा उनीहरको स्वाब संकलन गरिएको थियो । सोमबार संक्रमित पुष्टि भएकाहरु जगरनाथपुर गाउँपालिका –६ सन्ठीका निवासी हुन् ।
सन्ठी माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा ३४ जनालाई राखिएको औराहा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज पप्पु रौनियारले जनाए । ‘सन्ठी माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएका अधिकांश भारतको हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेशबाट आएका हुन्,’ उनले भने, ‘गत जेठ १४ मा उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो ।’
संक्रमितलाई नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । स्वास्थ्य निरीक्षक जयमोद ठाकुरका अनुसार संक्रमति पुष्टि भएकाहरुको कनट्याक्ट ट्रेसिङ थालिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७७ ०९:३६